စိုကျခငျးထဲကပေးတဲ့ ဘဝသငျခနျးစာ - Tameelay
July 15, 2020 by daddy
ဒီနအေ့လုပျလေးနားတော့ ခွံထဲအလညျရောကျဖွဈတယျ ။ ကိုယျနှဈသကျလို့စိုကျထားတဲ့အပငျတှကေတြော့ ရလေောငျးပေါငျးတငျလုပျပေးမှ ကွီးထှားရှငျသနျလာတာ ။ ကိုယျ့စိတျတိုငျးကဖြွဈလာတယျ ။ ၁ လလောကျဂရုမစိုကျပဲပဈထားတဲ့အခါ ဖွဈခငျြသလိုဖွဈနတော တှရေ့တယျ ။ ပတျဝနျးကငျြမှာလညျး မွကျတှေ ပေါငျးတှနေဲ့စုံလို့ ။ ဒါလေးကိုမွငျတော့ ဘာကိုတှေးမိလညျးဆို ။
ကြှနျတျောတို့ဘဝမှာလညျး အကငျြ့ကောငျးတှေ အကငျြ့ဆိုးတှဆေိုတာရှိတယျ ။ ကောငျးတဲ့အကငျြ့ဖွဈဖို့ သခြောဂရုတစိုကျ ပွုစုပြိုးထောငျပေးဖို့လိုသလောကျ မကောငျးတဲ့အကငျြ့ဖွဈဖို့ကြ ဘာမှကိုမလိုဘူး ။ သူ့အလိုလိုဖွဈလာတာ ။ ကိုယျဟာ သီးနှံကောငျးကောငျးဖွဈထှနျးခငျြရငျတော့ အပငျကို ပွုစု ဂရုစိုကျဖို့လိုသလို မလိုတဲ့ မွကျတှေ ပေါငျးတှကေိုလညျး ရှငျးလငျးပေးဖို့လိုတယျ ။ အဲ့လိုပဲ ဘဝမှာလညျး အောငျမွငျတဲ့သူဖွဈဖို့ လူတျောလူကောငျးဖွဈဖို့ဆိုရငျ အကငျြ့ကောငျးတှကေို လိုကျနာကငျြ့သုံးဖို့လိုသလို မကောငျးတဲ့အကငျြ့တှလေညျး စှနျ့ပဈဖို့လိုတယျ . . .
ဒါကွောငျ့ မိတျဆှတေို့လညျး ကိုယျ့မှာ ကောငျးတဲ့အကငျြ့တှကေ ဘာတှလေဲ . . .မကောငျးတဲ့အကငျြ့တှကေ ဘာတှလေဲဆိုတာ ပွနျလညျစဉျးစားသုံသပျရငျး ကောငျးတဲ့အရာတှကေို ကငျြ့သုံး မကောငျးတာတှကေို စှနျ့ပဈရငျး အောငျမွငျမှုကို အတူသှားကွပါစို့
ဒီနေ့အလုပ်လေးနားတော့ ခြံထဲအလည်ရောက်ဖြစ်တယ် ။ ကိုယ်နှစ်သက်လို့စိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကျတော့ ရေလောင်းပေါင်းတင်လုပ်ပေးမှ ကြီးထွားရှင်သန်လာတာ ။ ကိုယ့်စိတ်တိုင်းကျဖြစ်လာတယ် ။ ၁ လလောက်ဂရုမစိုက်ပဲပစ်ထားတဲ့အခါ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတာ တွေ့ရတယ် ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း မြက်တွေ ပေါင်းတွေနဲ့စုံလို့ ။ ဒါလေးကိုမြင်တော့ ဘာကိုတွေးမိလည်းဆို ။
ကျွန်တော်တို့ဘ၀မှာလည်း အကျင့်ကောင်းတွေ အကျင့်ဆိုးတွေဆိုတာရှိတယ် ။ ကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်ဖို့ သေချာဂရုတစိုက် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးဖို့လိုသလောက် မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်ဖို့ကျ ဘာမှကိုမလိုဘူး ။ သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတာ ။ ကိုယ်ဟာ သီးနှံကောင်းကောင်းဖြစ်ထွန်းချင်ရင်တော့ အပင်ကို ပြုစု ဂရုစိုက်ဖို့လိုသလို မလိုတဲ့ မြက်တွေ ပေါင်းတွေကိုလည်း ရှင်းလင်းပေးဖို့လိုတယ် ။ အဲ့လိုပဲ ဘ၀မှာလည်း အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ လူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့ဆိုရင် အကျင့်ကောင်းတွေကို လိုက်နာကျင့်သုံးဖို့လိုသလို မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေလည်း စွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ် . . .
ဒါကြောင့် မိတ်ဆွေတို့လည်း ကိုယ့်မှာ ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေက ဘာတွေလဲ . . .မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာ ပြန်လည်စဉ်းစားသုံသပ်ရင်း ကောင်းတဲ့အရာတွေကို ကျင့်သုံး မကောင်းတာတွေကို စွန့်ပစ်ရင်း အောင်မြင်မှုကို အတူသွားကြပါစို့
Categories Tameelay Knowledge Tags 15, Nay Lin Post navigation
” အကုသိုလျ၏မိတျဖကျဆိုးကြိုးမြား “